China Yakawedzera Metal Wire Mesh fekitari uye bhizimisi Ansheng
Iyo yakawedzerwa simbi mesh chinhu chesimbi simbi inoumbwa neyakawedzera simbi mesh kubaya uye yekucheka muchina kugadzira mesh.
Zvinhu: Aluminium ndiro, yakaderera kabhoni simbi ndiro, isina simbi ndiro, nickel ndiro, mhangura ndiro, aluminium magnesium alloy ndiro, nezvimwe.
Weaving uye hunhu: Inoitwa nekutsika uye kutambanudza yeplate simbi. Iyo mesh yepamusoro ine hunhu hwekugadzikana, ngura kuramba, yakanyanya kupisa tembiricha, uye yakanaka mweya mweya.
Mhando: Zvinoenderana nechimiro, inogona kukamurwa kuita: roll, sheet, nezvimwe.
Zvinoenderana nechinhu ichi, inogona kukamurwa kuita: aruminiyamu mesh, simbi isina waya, mesh yesimbi, kwakakurudzira simbi mesh, nickel mesh uye zvichingodaro.
Zvinoenderana neiyo mesh chimiro, inogona kuve yakakamurwa kuita: rhombus, mativi, yakatenderera gomba, yakakomberedzwa gomba, hove chiyero gomba, kamba yeganda zvichingodaro. Special magadzirirwo anogona kugadzirwa.
Surface kurapwa: PVC bemhapemha, inopisa-yakanyorova galvanizing, Electro-galvanizing, anodizing (aruminiyamu ndiro), pfapfaidzo Anti-ngura pendi, etc.
Kushanda:Zvese zvigadzirwa zvakawedzerwa zvesimbi zvinogadzirwa uye kugadziriswa neepamberi komputa tekinoroji, ine akasiyana maburi mapatani uye anochinjika kurongeka. Izvo zvigadzirwa zvinogona kutemwa, kukotama, kutenderera, kurapwa kwepamusoro uye kumwe kwakadzika-nhanho kugadzirisa, ayo ari akasiyana siyana.
1. Inogona kushandiswa kumuchina firita, mushonga, kugadzira pepa, kusefa, kudzivirira nyika, indasitiri, kuvaka ngarava, chiedza indasitiri machira, kurima uye sideline indasitiri, aquaculture, petrochemical indasitiri, midziyo yemumba, inoshandiswawo kune siringi yakabatana, madhoo nemahwindo zvinopesana- umbavha, paseji yakachengeteka, masitepisi emakorodhi Mabhodhi, matafura nemacheya, mavende, maforamu akasiyana siyana ekutakura zvinhu, masherufu, nezvimwe.
2. Inogona kushandiswa kunzvimbo hombe dzekunamira mapurani senge zvivakwa zvepamusoro-soro, dzimba dzevagari, mashopu, nezvimwewo. Inoshandiswa seyakaomeswa pepurasita nekunamatira kwakasimba, kuramba kurwisa, kudzivisa kudengenyeka kwenyika uye humwe hunhu. Iyo mhando nyowani yesimbi yekuvaka zvinhu mukuvaka kwazvino uye inogona zvakare kushandiswa pakuvaka Reinforcement yemigwagwa mikuru mabhiriji.
3. Inogona kushandiswa seyakakura nzira yekuvharira, nhandare fenzi, mugwagwa girini bhandi kudzivirira mambure, yekurima sainzi department bvunzo saiti dziviriro uye diki ore kuongorora.
Tikiti (mm) SWD (mm) LWD (mm) Tambo (mm) Upamhi (m) Kureba (m) Kurema (kg / m2)
Pashure: Nickel Wire Mesh
Zvadaro: Welded Wire Mesh